विजय गच्छदार पक्राउ पर्दै, प्रहरीले पनि जारि गर्यो पक्राउ पुर्जी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
विजय गच्छदार पक्राउ पर्दै, प्रहरीले पनि जारि गर्यो पक्राउ पुर्जी !
तर, ब्युरोले‘हाइप्रोफाइल’ लाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजाने तयारी गरेको बुझिएको छ।
‘पक्राउ पूर्जी जारी भएकालाई सकेसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदनसँगै अदालतमा पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाको आरोप लागेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले थुनामा छन्। बाँकी कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्।
उनीसँगै छोरा कमल बस्नेत, ज्वाईँद्वय प्रज्जवल अधिकारी र मनोज सुवेदी अनुसन्धानमा छन्। सेतो पाटि बाट